GTT International - Genève: Atoa Jean-Michel RASOLONJATOVO, mpahay lalàna: Vahinin'ny "Invité du Zoma" - TV Plus (VO)
Atoa Jean-Michel RASOLONJATOVO, mpahay lalàna: Vahinin'ny "Invité du Zoma" - TV Plus (VO)
28/02/2013: Nivahiny tao amin’ny fandaharana "Invité du Zoma" n’ny TV Plus AtoaJean-Michel RASOLONJATOVO, mpahay sy mpampianatra lalàna, mpitsara ao amin’ny fitsarana momban’ny fitantanambolam-pirenena (Cour des Comptes), diplaomaty taloha. Niompana tamin’ny olana misy eto amin’ny Firenena indrindra momba ny fanendrena Praiministra ny dinika nifanaovan’izy sy Rtoa Onitiana Réaly. Nasongadiny tamin’izany fa mazava tsara ny voalaza ao amin’ny lalàm-panorenana (and. 54) ka tsy ilàna "interprétation" intsony: antoko na vondrona politika no tokony manolotra olona fa tsy fivondronan’olona toy ny MAPAR na PMP akory. Nomeny ny sahaza azy tsara koa ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC) noho ny tsy fanarahany lalàna. Mety hoy izy ny fanafoanana io andrim-panjakana io satria anisan’ny fototry ny olana tokoa izy io hatramin’izay. Nomarihany ihany koa ny tsy maha mety ny lalàm-panorenena manankery amin’izao noho izy manome fahefana feno tsy refesi-mandidy ny Filoham-pirenena toy ny misy any amin’ireo firenena ianjadian’i Fransafrika. Farany dia nandroso hevitra ihany koa an’Atoa Rajaonarimampianina izy mba ivoahana amin’izany, dia nyfanafoanana io Antenimieram-pirenena io.
Deraina manokana ny fahasahiany milaza ny tena zava-misy sy ny marina, ary tsy momba na iza na iza fa ny lalàna sy ny fahamarinana ihany no zava-dehibe.